5 Of The Best lisitry ny baovao In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Of The Best lisitry ny baovao In Eoropa
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel UK, Travel Europe
Rehefa manao dia lavitra any ivelany, tiantsika rehetra ny fahafaha-mandeha miantsena ho an'ny tenantsika, fianakaviana sy namana! Tsy mahatsapa samy hafa any amin'ny firenena hafa, tsy izany no? Raha ny Eoropa, miantsena tsy handiso fanantenana. Tsy vitan'ny no manana tanàna fiantsenana malaza toa an'i Londres sy Milan, izy aza dia manana toeram-pivarotana fivarotana maro izay manome fihenam-bidy lehibe amin'ny làlana avo mankamin'ny marika lafo vidy avo indrindra. Ity ambany ity antsipirihany izahay 5 Of The Best lisitry ny baovao In Eoropa.
Ladies, mety tokony ho kely mandresy lahatra ny handresy lahatra ny lahy niara handray, fa ny teny fikasana ny mpamorona etikety amin'ny mihena vidiny, izany dia tena very maina ny ezaka. Ary raha hubby na ny olon-tiany dia tsy resy lahatra, ny fivoahan'ny an-trano tanàna dia ho be ny fivarotana kafe izay afaka mipetraka sy mijery ny olona raha mitoetra tsara tarehy ianao mandra-miantsena ianao alatsany!
Barberino Designer Outlet, Italia
Ny Outlet no misy ny 30 km Florence, ary dia mety ho azo mora foana lamasinina na fiara na amin'ny fiara fitateram-bahoaka tany tokony ho antsasaky ny ora. Ny Barberino Designer Outlet dia tanàna fiantsenana: miorina ao amin'ny faritra suburban, dia mijery toy ny tanàna kely maro “trano” mifanolotra fa handry ny toeram-pivarotana. Anisan'ny tombony iray fivoahan'ny toy ny Barberino Designer Outlet dia isalasalana fa ny avo fitanan'i ny marika fivarotana lehibe any amin'ny faritra voafetra.
Hahita Italiana sy iraisam-pirenena marika malaza toy ny Prada, Dolce & Gabbana, Cavalli, Patrizia Pepe, Michael Kors, Pinko, Furla, fa ny iraisam-pirenena maro toa ny Mino, Twin Set, uneven, Hugo Boss, Nike, ary Adidas, manonona vitsivitsy amin'ireo malaza indrindra. Raha toa ianao ka matahotra ny hahazo very sy very ny toerana tena marika, mandeha ho any amin'ny afovoan-tsenambarotra dia hahita maimaim-poana, tsipiriany Map ny Outlet.
Nahoana izahay mba hametraka izany ho an'ny tsara indrindra lisitry ny baovao any Eoropa? Ny fivarotana mampanantena fihenam-bidy ny 30 ny 70% oharina amin'ny fivarotana vola an tsotra toeram-pivarotana ary matetika misy kokoa fisondrotana manokana! Raha tia ny marika lehibe, ianao vao mihazakazaka ihany ny mety hahita ny sasany efaha lehibe, fakana an'io akanjo na kitapo io, na ilay kiraro efa hitanao tamin'ny vidiny lafo kokoa tao amin'ny magazay tao an-tanàna.
Bicester Village, fanjakana Mitambatra
Bicester Village manana ny zavatra rehetra izay mitady rehefa discounted endrika miantsena. Efa nanampy Bicester ho an'ny tsara indrindra any Eoropa lisitry ny baovao lisitra tahaka ny iray amin'ireo lafo vidy antsinjarany toerana ambony ao amin'ny UK. Izany no eo amin'ny malaza indrindra toerana mpizaha tany tany Angletera for vahiny, miaraka amin'ny Lapan'ny Buckingham sy ny Tilikambon'i Londres.
Tsy ho an'ny mpizaha tany ihany, anefa. Fashion mpamoaka lahatsoratra sy ireo mpanao gazety tsy tapaka ireo mpitsidika ary toy izany koa Kate Middleton, Duchess an'i Cambridge. Izy indray mandeha mividy sada hitafy ny akanjo mandry ho Prince George. Na dia mpanjaka na ny Vogue mpamoaka lahatsoratra, izay tsy toy ny hoe mpiady varotra tsy?
Amsterdam Ny London Fiaran-dalamby
La Vallée Village, Serris, Frantsa
Fantaro tsy manam-paharoa eo amin'ny traikefa tsena misokatra-rivotra amin'ny toerana La Vallée Village akaikin'i Paris. Betsaka kokoa noho ny 110 BOUTIQUES ny lamaody iraisam-pirenena malaza eran-tany. Misy ihany koa ny fomba fiainana marika manolotra ny vanim-potoana teo aloha fanangonana amin'ny mihena vidiny, taona rehetra manodidina.
La Vallée Village dia iray amin'ireo tsara indrindra lisitry ny baovao any Eoropa. Ny an-trano ny marika malaza sy manome fantina tsara notsongain'ilay tolotra mba hahazoana antoka vahiny mankafy andro izany tsy hay hadinoina.
Trano ny trano amin'ny mihoatra 110 BOUTIQUES ny marika malaza ao anatin'izany: Armani, Calvin Klein, Carven, Charles Tyrwhitt, CH Carolina Herrera, Coach, Diane of Furstenberg, Fred Perry, Furla, Mino, Hackett, Jimmy Choo, Kenzo, Longchamp, Marni, Michael Kors, Moncler, Paul & Joe, Paul Smith, Poiray, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, S.T. Dupont, Sandro, Superdry, Ted Baker, Tods, Tommy Hilfiger, The Kooples, Tumi, UGG, Vanessa Bruno, Yves Salomon, Zadig & Voltaire ary be dia be ka tsy azontsika tononina anarana daholo.
Serravalle Designer Outlet, Serravalle akaiky Milan, Italia
Ny lisitry ny tsara indrindra any Eoropa lisitry ny baovao tsy mahazo misaraka avy Milan! Raha mitady fiantsenana avo lenta ianao, Milan dia matetika no lohalaharana amin'ny lisitry ny olona maro. Fantatrao ve fa afaka mahazo bargains eo amin'ny marika koa fiantsenana? Tsidiho ny Serravalle Designer Outlet ho an'ny lehibe sy ny fihenam-bidy amin'ny avo lamaody marika eny an-dalana.
Any ao am-pon'ny ny Gavi havoana. Izany dia mifandray amin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka mivezivezy isan'andro service avy any Milan (Travel ny fotoana eo ho eo. 50 minitra). Serravalle Designer Outlet no outlet lehibe indrindra any Eropa natokana ho amin'izao tontolo izao ny lafo vidy fiantsenana. Inside, ankoatry ny 11 toerana ny tsiro. izany dia ahitana ny trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana. Fiantsenana tia dia hahita mihoatra ny 230 fivarotana. Rehetra ka voky ny tsara indrindra marika iraisam-pirenena, miampy lehibe anarana Italiana mpamorona marika anisan'izany Casadei, vaingan-dranomandry, ary Missoni.
Wertheim Village, Wurzburg, Alemaina
Mankafy Fitsidihana An'i Wurzburg, iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra alemà sy ny UNESCO World Heritage toerana. Hitety ny toerana manan-tantara ary ny tsangambato dia hahazo ny tsara indrindra amin'ny Wertheim bargains Village Outlet fiantsenana distrika. Ity jery fiantsenana tanàna ao Wurzburg Mirehareha be 110 an-toerana sy iraisam-pirenena marika! Ny tanàna fotsiny 50 minitra avy any Frankfurt na 60 Minutes from Nuremberg. Misy ihany koa ny maro mba hiaro anao eateries nahatonga noho ny miantsena!
Get-kalitao avo Eoropeana mpamorona lamaody, fanaka, na kojakoja an-trano ho an'ny 30% ny 60% Kely kokoa. Ny andro endrika nandoro ny ambim-bavany sy ny vanim-potoana sisa tavela ela dia lasa. Factory fivoahan'ny fivarotana izao matetika anivon'ny Miparitaka ny tsara tarehy tanàna kely na antonony. Ary koa ny manodidina tanàn-dehibe ary, rehetra fantatrao, mety tsara varavarana manaraka! fitsangatsanganana ary kitapo vaovao na iza na iza?
Frankfurt ho Wurzburg Lamasinina
Nuremberg ho Wurzburg Lamasinina
Stuttgart ho Wurzburg Lamasinina
Bonn any Wurzburg Lamasinina
Vonona ny hahazo ny mitsambikina amin'ny fiaran-dalamby ho an'ny tsena lavitra ny androm-piainany? Trust Save A Train mba anao tapakila any fifadian-kanina sy tsy misy miafina sarany. (More vola fiantsenana!)
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Of The Best lisitry ny baovao In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-shopping-outlets-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#mpamorona marika #lamaody #baovao fiantsenana